Doorashada kuraasta Golaha shacabka oo la billaabayo | KEYDMEDIA ONLINE
Doorashada kuraasta Golaha shacabka oo la billaabayo
Doorashada kuraasta Aqalka sare ee Gobollada Waqooyi, ayaa la soo af-meeray dhamaadkii bishii hore, kadib markii xal laga gaaray khilaaf u dhaxeeyay Guuleed iyo Xaashi, oo kala hoggaaminayay labo garab.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, oo hadal kooban ka jeediyay munaasabad soo dhaweyn ah oo loo sameeyay ergadii Soomaaliya ee ka qeyb gashay dhageysiga ku dhawaaqistii go’aankii badda ee ICJ, ayaa shaacayay xilliga ay billaabaneyso, doorashada Golaha Shacabka.
RW Rooble, wuxuu xusay, in Mahadi Maxamed Guuleed iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ay isku af-garteen, in maantaba la guda galo u diyaar garowga doorashada kuraasta Golaha Shacabka ay ku leyihiin gobollada Waqooyi, isla-markaana todobaadka soo socda la doorto xubnaha ugu horreeya ee xildhibannada Aqalka hoose ee ka soo jeeda Soomaaliland.
46 Xildhibaan ayaa gobollada waqooyi ku matala Aqalka Shacabka ee Baarlamaanka JFS, cabshooyin xooggan ayaa hareeyay maalmihii la soo dhaafay, hayeeshee, inta badan siyaasiyiinta caanka ah iyo Xildhibaannadii ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ayaa wali kalsooni u muujinaya sida wax u socdaan.
Xubnaha Golaha Shacabka ee Soomaaliland, ayay doorashadoodu ka dhici doontaa Teendhada Afisyooni, halkaas oo lagu doortay 11-ka kursi ee reer Waqooyi ku leeyihiin Golaha Aqalka Sare.
Dhanka kale, RW Rooble, wuxuu Madaxda Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, ku boorriyay in ay guda galaan, doorashada Aqalka hoose, si dalka loogu dhiso nidaam cusub oo ka saara firaaqa dastuuriga.
Sida ku caddeed, jadwal ay wadajir u soo saareen, Guddiga hirgalinta doorashooyinka dadban ee heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed, 16-kii July 2021, wuxuu qorshuhu ahaa in doorashooyinka Aqalka Sare la so gabagabeeyo 28-kii July, Isla-markaana billawgii August la guda galo hannaanka Golaha Shacabka, kaas oo la madlay in la so af-meero billowgii bishaan October.
Hayeeshee, Jadwalkaas ayaa fashilmay, waxaana la filayaa in dhamaadka bisha November ama billowga bisha December ee sanadkaan la gunaanadayo doorahada Golaha Shacabka.
Doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa hore loo qorsheeyay in la qabto 10-kii October, hayeeshee, qorshahaas ayaa meesha ka baxay, waxaana doorashada kursiga dalka ugu sarreeya la qaban karaa dhamaadka December ee sanadkaan.